Umgca: yipodcast entsha yeApple eya kuba nothotho lwayo ekupheleni konyaka | Ndisuka mac
Sithethile okwethutyana malunga nokungena kuka-Apple kwi-podcasting ngokwenza umxholo wokuqala. Ngomhla ka-Meyi wonyaka ophelileyo, la marhe aqala ukuqokelela umphunga, ecebisa ukuba i-Apple yayilungiselela ukugxila ekwenzeni ii-podcast zayo.
Ii-podcasts zentsusa zika-Apple bekulindeleke ukuba zigxile kwi ukukhuthaza umxholo wakho weApple TV + Kwaye ngokufanelekileyo kube njalo. Kwangoko kulo nyaka, ngaphambi kwenkulumbuso yexesha lesibini lothotho lwayo kubo bonke uLuntu, uApple wakhupha ipodcast malunga noluhlu.
Ayisiyiyo kuphela le, kuba kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, uApple upapashe ipodcast entsha, enesihloko Umgca apho iziqendu ezibini zokuqala sele zikhona. Veki nganye, iApple iya kuqala inqaku elitsha le-6 yinxalenye yale podcast.
Ngelixa iPodcast Yoluntu Lonke isekwe kuthotho olukhoyo ngoku, iThe Line podcast, ijolise kwi uthotho lwamaxwebhu alandelayo aza kukhutshwa yiApple kamva kulo nyaka, uthotho lwamaxwebhu olwenziwe ngamacandelo ama-4.
U-Apple uchaza le podcast intsha njenge:
Kwi-2018, iqela le-Navy SEALs laqhekeka laza lahlawulisa umphathi wabo, u-Eddie Gallagher, ngokubulala, ebarhuqela bonke kwelona tyala liphambili lemfazwe kwisizukulwana. Ngaba i-SEAL Navy SEAL yawela umgca e-Iraq? UDan Taberski ukungenisa ngaphakathi kwelo gumbi okokuqala, ezobe ikhethini lokuba iMelika ilwa njani iimfazwe zayo namhlanje kwaye ityhila ibali elijongwa luvavanyo lwetyala. Ngeencoko ezisondeleyo kunye nabangaphezulu kwe-50 yabaqhubi abakhethekileyo, uthotho lukhangela indlela ongacacanga ngayo umgca phakathi kokulungileyo nokungalunganga kwiimfazwe ezingunaphakade, kwaye yintoni eyenzayo ezintliziyweni nasezingqondweni zabo sibathumelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Umgca: yipodcast entsha yeApple eya kuthi ibe nothotho lwayo ukuphela konyaka
IDisk Drill ngoku iyahambelana neM1 ye-Apple